FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SHORKIE TZU - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Shorkie Tzu
Alika mifangaro mifangaro Shih Tzu / Yorkie
'Charlie Bear ity. Izy dia Shih Tzu / Yorkie aka Shorkie, aseho eto amin'ny 2 taona. Izy no zazalahy kely mamy sy malefaka indrindra. Tsara fitondran-tena tanteraka izy ary tia ny any ivelany, milomano any an-dranomasina, milalao kitties sy cuddling. Charlie tsy manana fahazaran-dratsy na olana amin'ny fitondran-tena . Somary kely izy sarotra amboarina amin'ny vilany amin'ny maha-zazakely, fa ankehitriny efa nahazo ny fihantonany. Saro-kenatra izy ary efa hatramin'ny naha zazakely azy. Tiany ny olona sy ny biby hafa ary tsy manana taolana ratsy ao amin'ny vatany izy. '
alika amboadia amboadia amidy
Ny alika Shorkie Tzu dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Shih Tzu ary ny Yorkshire Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Charlie Bear, Shih-Tzu / Yorkie aka Shorkie, aseho eto amin'ny faha-2 taonany ary fohy ny volony
Milly the Shorkie amin'ny 1 taona— 'Pretty Milly dia alika kely tonga lafatra, marina ny anarany satria adala sy mamy izy. Tia olona izy ary LEHIBE miaraka amin'ny ankizy . Tiany ny misolelaka sy milalao. '
Zoe the Shorkie Tzu (Yorkie / Shih Tzu mix dog) amin'ny taona 1, sary natolotry ny Priscilla's Precious Pups
Zoe the Shorkie Tzu (karazany afangaro Yorkie / Shih Tzu) ho alika kely amin'ny 10 herinandro, sary natolotry ny Priscilla's Precious Pups
Lexi the Shorkie Tzu amin'ny 6 herinandro - ny reniny dia Yorkie feno taona ary ny rainy kosa dia Shih Tzu.
Lexi the Shorkie Tzu amin'ny faha-6 taonany, milanja 5,5 lbs eo ho eo. — Yorkie no lehibe ny reniny ary i Shih Tzu no niteraka ny rainy.
'Sambatra ity, ilay Shorkie faran'izay lehibe! Izy dia 3 volana amin'ity sary ity ary isaky ny santimetatra dia zaza mahagaga. Izy dia bund ny angovo sy ny fitiavana. Tena marani-tsaina sy mora tohina koa izy. Fantany ny feon'ny fiarako ary voafetra hiarahaba ahy isan'andro. Tiany ny mitondra ny kilalaony eo ambony fandriako mba hilalao amin'izy ireo. Tia mitsako zavatra koa izy, saingy afaka nifehy an'io fahazaran-dratsy io izahay tao anatin'ny andro vitsivitsy. '
ohatrinona ny habetsaky ny retrievers volamena kely
Alika kely Shorkie Tzu, sary nahazoana alàlana avy amin'ny Pricelesspups
Ziggy, alika kely Shorkie Tzu tamin'ny 11 herinandro, milanja 3,5 lbs. — i Shih Tzu purebred ny maman ary ny dadany dia Yorkshire Terrier madio.
Sprocket ny Shorkie Tzu (Shih Tzu / Yorkie mifangaro alika) amin'ny 9 volana
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Shorkie Tzu
Sarin'i Shorkie Tzu
Lisitry ny alika mitambatra Yorkshire Terrier
lava volo dachshund jack russell mix
volamena retriever 1 taona
shih tzu afangaro amin'ny yorkie
afangaro chow sy mix lab
mix amerikana eskimo pomeranian mini
sarina pitbulls mifangaro amin'ny boxer